TANORA FANANTENANA ATSIMON'IMAHAMASINA - Tononkira Malagasy - serasera.org 1992-2001: Ny taona 1993 no nahazoany ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanan-kira izay nokarakarain'ny FMBM ihany, tamin'ilay hira hoe :"AOKA JEHOVAH HIFALY AMIN'NY ASANY"(album 2). Ny taona 1998 no nahazoany ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanan-kira nokarakarain'ny HEFA (Hetsika Ekiominika sy Fanatanjahantena) tamin'ilay hira hoe : "FA TSARA NY MIHIRA(SALAMO 147)", hira noforonin'i Razafindrakoto Norbert(album 2). Ny taona 2001 no feno 20 taona.Nisy ny konferansa nentina niadiana tamin’ny zava-mahadomelina tamin'ny alalan'ny "planina 5 andro", ary isaorana an'Andriamanitra fa am-polony no tafàla tanteraka tamin'ny sigara tamin'izany. Anisan'ny tena nampiavaka ity faha-20 taona ity ny nisian'ny "Herinandro Fideràna": Fideràna isan-kariva sy ny "Foir'O Promo", hetsika ara-barotra "inédit". >2002-2011: Ny taona 2003 no Tafatsangana ny Fikambanana GAS’GOSPEL. Ny taona 2006 kosa no nankalazana an'Andriamanitra ny Jobily faha-25 taona. Rindra-kira lehibe tao @ lapan'ny kolontsaina sy herinandro fiderana faha-2 ary konferansa lehibe no natao tamin’izany. Nanomboka teo dia hita tsy nitsahatra ny fitoriana natao tao amin'ny lapan'ny kolontsaina ka mbola nisy tamin'ny 2008 sy 2009. Tamin'ireo taona ireo ihany koa nefa raha nanao fifaninanan-kira ny "Malagasy Midera" dia nahazo ny laharana voalohany ny Tanora Fanantenana ny 2008 ary faha-3 kosa ny 2009. Ny taona 2011 no feno 30 taona ny TF, Fideràna lehibe tao amin'ny lapan'ny kolontsaina, herinandro fideràna faha-3 ary kaonferansa no nanamarihana izany. >Ny asa tanterahany: Mitaiza sy manabe ny olona tsirairay na kely na lehibe mba tsy hanendry zava-mahadomelina ho an’izay mbola tsy ao anatiny, ary mba handresy lahatra ireo izay efa ao anatiny mba hiala amin’izany; Mitory ny filazantsara; Mamoaka raki-kira ara-pilazantsara; Manao konferansa manodidina ny loha-hevitra hiadiana amin’ny zava-mahadomelina. >Ny raki-kira sy raki-tsary efa nivoaka: - 1991: "Hitory ny Anaranao", K7 - 2001: "Hitombo Lalandava", K7, CD Audio - 2006: "Fenoiko Fankalazàna", CD Audio - 2006: "Vaovao Mahafaly", CD Vidéo - 2009: "Asandrato Ho Azy", CD Audio - 2012: "Hiara-dàlana", DVD" />
TANORA FANANTENANA ATSIMON'IMAHAMASINA
Tamin'ny : 11/08/2010 07:54:13
Ny Tanora Fanantenana(TF) dia antoko mpihira mijoro ao amin'ny FJKM Atsimon'Imahamasina; niorina tamin’ny 01 may 1981, ary zanaky ny Sampana Vokovoko Manga.
Nankalaza an'Andriamanitra noho ny faha -10 taona ny taona 1991. Rindran-kira fitoriana lehibe tao amin'ny "Amphithéatre" ANS Ampefiloha no anisan'ny nanamarinana izany.
Isan’ny nampiavaka tamin'io taona io koa ny nahazoan'ny TF ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanan-kira izay nokarakarain’ny Fikambanana Mpampiely Bailboly Malagasy, tamin’ilay hira "LOZAKO RAHA TSY MITORY"(album 1 sy 2), hira noforonon'i Haja Ulisse, i Vonjy kosa no niventy.Taorian'io no naha-voafidy azy hihira ny Hira Fanevan’ny "3ème Jeux des Iles de l’Océan Indien".
Ny taona 1993 no nahazoany ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanan-kira izay nokarakarain'ny FMBM ihany, tamin'ilay hira hoe :"AOKA JEHOVAH HIFALY AMIN'NY ASANY"(album 2).
Ny taona 1998 no nahazoany ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanan-kira nokarakarain'ny HEFA (Hetsika Ekiominika sy Fanatanjahantena) tamin'ilay hira hoe : "FA TSARA NY MIHIRA(SALAMO 147)", hira noforonin'i Razafindrakoto Norbert(album 2).
Ny taona 2001 no feno 20 taona.Nisy ny konferansa nentina niadiana tamin’ny zava-mahadomelina tamin'ny alalan'ny "planina 5 andro", ary isaorana an'Andriamanitra fa am-polony no tafàla tanteraka tamin'ny sigara tamin'izany. Anisan'ny tena nampiavaka ity faha-20 taona ity ny nisian'ny "Herinandro Fideràna": Fideràna isan-kariva sy ny "Foir'O Promo", hetsika ara-barotra "inédit".
Ny taona 2003 no Tafatsangana ny Fikambanana GAS’GOSPEL.
Ny taona 2006 kosa no nankalazana an'Andriamanitra ny Jobily faha-25 taona. Rindra-kira lehibe tao @ lapan'ny kolontsaina sy herinandro fiderana faha-2 ary konferansa lehibe no natao tamin’izany. Nanomboka teo dia hita tsy nitsahatra ny fitoriana natao tao amin'ny lapan'ny kolontsaina ka mbola nisy tamin'ny 2008 sy 2009. Tamin'ireo taona ireo ihany koa nefa raha nanao fifaninanan-kira ny "Malagasy Midera" dia nahazo ny laharana voalohany ny Tanora Fanantenana ny 2008 ary faha-3 kosa ny 2009.
Ny taona 2011 no feno 30 taona ny TF, Fideràna lehibe tao amin'ny lapan'ny kolontsaina, herinandro fideràna faha-3 ary kaonferansa no nanamarihana izany.
>Ny asa tanterahany:
Mitaiza sy manabe ny olona tsirairay na kely na lehibe mba tsy hanendry zava-mahadomelina ho an’izay mbola tsy ao anatiny, ary mba handresy lahatra ireo izay efa ao anatiny mba hiala amin’izany; Mitory ny filazantsara; Mamoaka raki-kira ara-pilazantsara; Manao konferansa manodidina ny loha-hevitra hiadiana amin’ny zava-mahadomelina.
>Ny raki-kira sy raki-tsary efa nivoaka:
- 1991: "Hitory ny Anaranao", K7
- 2001: "Hitombo Lalandava", K7, CD Audio
- 2006: "Fenoiko Fankalazàna", CD Audio
- 2006: "Vaovao Mahafaly", CD Vidéo
- 2009: "Asandrato Ho Azy", CD Audio
- 2012: "Hiara-dàlana", DVD
AOKA JEHOVAH HIFALY AMIN'NY ASANY (Salamo 104)
FA TSARA NY MIHIRA (Salamo 147)
Page rendered in 1.1594 seconds